ဟာသ – Messi Club
မင်ျဂလာဦးည သတို့သမီးမှာ သတိလဈလောကျအောငျ ဖွဈသှားခဲ့ရတဲ့အဖွဈ…
မဂ်လာဦးည ရင်ခုန်သံ”” အားးးးးးး!!!” အော်သံကြားပေမယ့်ဒါသဘာဝပဲလေဆိုပြီး အိမ်သားများ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်သည် ။ မင်္ဂလာဦးညပေးကိုးးးးးအော်သံကြားပြီး သိပ်မကြာလိုက်. . .လူပျိုကြီး Moe Aung အသံနက်ကြီးဖြင့် ” အမေနဲ့အဖေတို့ရေလာကြပါဦး ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး ”“ဟာဒုက္ခတော့များပြီနဲ့တူတယ် ယောက်ျားရေတော့ သားကို သွားကြည့်ဦး´ ”သိပ်မကြာလိုက် အဖေဖြစ်သူမှ ထပ်အော်ပြန်သည် …။“ မင့်းချွေးမသတိမလည်တော့ဘူးဟ ဆရာဝန် အမြန်ခေါ် ”” ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲမသိ ” ကိုယ်လဲတက်မကြည့်ရဲ သွေးသန်ရဲရဲတွေ မမြင်ရဲဘူး အိမ်ထဲကရုပ်ရုပ်သည်းသည်း အသံတွေကြောင့် ဘေးအိမ်ကလူများ ပါရောက်လာကြသည် … … ။ သိပ်မကြာလိုက်။“လမ်းဖယ်လမ်းဖယ် ဆရာလာပြီ´”အဖေကြီးက “မင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ ဆရာ့ကိုပြောပြလိုက်´´ ”ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆရာရဲ့”ကန်တော့ပါရဲ့ကျွန်တော်ကလဲ ညအိပ်ဖို့ ပုဆိုးလဲနေတုန်း သူကထအော်ပြီး သတိလစ်သွားတာပဲ´” “နှလုံးတော့ခုန်သေးတယ် အသက်ရှိသေးတယ် သွေးအားနည်းနေတော့ဆေးချိတ်ပေးခဲ့လိုက်မယ် ” […]
မစိတျမှနျနတေဲ့ လူပြိုကွီးနှငျ့ ဖဘေု့တျအှနျလိုငျးဖူးစာ ဂဈတာရှိတျမမ တို့တှကွေ့သောအခါ “ကြှနျတေျာ့ကိုဖမျးကွပါ… ကြှနျတေျာ့ကို မွနျမွနျဖမျးပေးကွပါ အီးအဟီးဟီး…” လူပြိုကွီးဦးတိုး ရဲစခနျးထဲကို ငိုကွီးခကျြမနဲ့ ပွေးဝငျသှားတယျ။ တာဝနျကရြဲအရာရှိက- “ကဲ ထိုငျပါ… တဈကိုယျလုံးလညျး ဒဏျရာတှနေဲ့ မွငျမကောငျးပါလား?… ဘယျလိုဖွဈလာတာလဲ?… ဘာကိစ်စကွောငျ့ဖမျးရမှာလဲဆိုတာပွောပါဦး” “ဒီလိုပါ ဦးရဲကွီးရယျ… ကြှနျတျောနဲ့ အှနျလိုငျးမှာခဈြကွိုကျနတေဲ့ကောငျမလေးကို အခုတညျးခိုခနျးမှာခြိနျးတှပွေီ့းမှ ဒီအတိုငျးထားပဈခဲ့ပါတယျ… ကြှနျတေျာ့မှာအပွဈရှိပါတယျ… ကြှနျတေျာ့ကိုဖမျးပါဗြာ” “ဟာကှာ ခငျဗြားမို့လို့ နှမခငျြးမစာမနာလုပျရကျတယျ… ကောငျးပွီလေ ဒါဆိုရငျတော့ပွဈမှုမွောကျသှားပွီ… ဖမျးရမှာပေါ့။ ကဲ… ဖွဈစဉျကို အစကနသေခြောပွောပွစမျးပါအုနျး” ရဲအရာရှိကစာအုပျနဲ့ဘောလျပငျယူပွီးလိုကျမှတျဖို့ပွငျတယျ။“ဒီလိုပါဦးရဲကွီးရယျ… အဲဒီအှနျလိုငျးကခဈြသူကို ခိုးပွေးဖို့ ကြှနျတျောတညျးခိုးခနျးတဈခုကို ခြိနျးလိုကျပါတယျ… ကြှနျတျောတညျးခိုခနျးကို ရောကျသှားတော့ သူကအရငျရောကျနှငျ့နပေါပွီ” “ဟုတျပွီဆကျပွော” “ကြှနျတျောအခနျးထဲဝငျသှားတော့ သူဘာလုပျနတေယျထငျလဲ” “ဘာလုပျနလေဲ…?” “ကုတငျပျေါထိုငျပွီး နှပျခြေးထိုငျကလျောနတေယျဗြာ…” “အဲ… ဟုတျပါပွီလေ…နောကျတော့ရော?” “ကြှနျတျောလညျး […]
ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထတုန်းဆိုတဲ့ ဦးလေးကြီး ရဲ့အဖြစ်
ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထတုန်းဆိုတဲ့ ဦးလေးကြီး ရဲ့အဖြစ် ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထတုန်းဆိုတဲ့ ဦးလေးကြီး ဦးဆိုရင် ကြောက်နေရသည် ။ ဖုန်းဝင်လာလို့ ကောက်ကိုင်လိုက်တာ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ မနေ့ကမှ ချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့ ခေးလေးရဲ့ ဖုန်းဖြစ်နေတော့ ကျုပ် ပျော်သွားတယ်။ “ဦး” “ပြော ခလိန်း” “ဦး ပျော်လို့ရပြီ သိလား” ချိန်းတွေ့တော့မယ် ထင်တယ်လို့ တွေးမိပြီး ကျုပ် ပီတိတွေ ဖျာနေမိတယ် ။ “အွန်း ဘာလို့လဲ” “ခလိန်းမှာ ဦးနဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီလေ” “ဖူးးးးးး ” သောက်နေတဲ့ ကော်ဖီတောင် ပါးစပ်က ပြန်ထွက်ကုန်တယ်။ လခွမ်းမှပဲ။ […]
“ဖွဈမှဖွဈရလေ….ကှယျ…” မိခြိုတဈယောကျ….ခှဲစိတျခံရနျအတှကျ…ဆေးရုံတဈခု၏ ခနျးမတဈခုအတှငျးမှာဖွဈသညျ။ မိခြို…….ဟာ တှနျးလှညျးကုတငျလေးပျေါမှာ ပကျလကျကလေးစောငျ့နရေရှာတယျ။ သူမဟာ …ခှဲစိပျကုသခံရမှာ ဖွဈတဲ့ အတှကျ အဝတျအစားမပါ ..ဗလာကိုယျတီးနဲ့ ဖွဈနလေို့ စောငျဖွူပါးလေးနဲ့ ခြုံလှား..ပေးထားကွတယျ။ ခဏနတေော့ ….ဝတျရုံအဖွူကွီးဝတျထားတဲ့ လူတဈယောကျ အခနျးအတှငျးဝငျလာပွီး… သူမကိုလှားခွုံပေးထားတဲ့ စောငျပါးလေးကို မ, ကွညျ့တယျ။ ပွီးတော့ ပွုံးပွုံး ပွုံးပွုံးနဲ့ ပွနျထှကျသှားတယျ။……. တဈခါ…ခဏနပွေနျတော့ ခုနလူ ဝငျလာပွီး…… စောငျကို မ, ကွညျ့ပွနျတယျ။ ပွီးတော့ ပွုံးပွုံး ပွုံးပွုံးနဲ့ ပွနျထှကျသှားပွနျတယျ။ အဲ…မကွာပွနျဖူး… ခုနလူပဲ… တတိယအကွိမျအခနျးထဲပွနျဝငျလာပွီး စောငျကို မ, ကွညျ့ပွနျတယျ။ ဒီတခါတော့.မိခြိုက…မနနေိုငျတော့လို့…..မေးတယျ… … “ဒေါကျတာ၊ ကမြကို မကွာခငျ ခှဲစိပျကွတော့မှာ မဟုတျလား ဟငျ…” “သိဘူးလေ.. ကနြျောက ဒီဆေးရုံကို ဆေးပွနျသုတျနတေဲ့ […]
စိတ်မော၊ လူမောနဲ့ မင်္ဂလာဦးည က ဖြစ်ရပ်…
စိတ်မော၊ လူမောနဲ့ မင်္ဂလာဦးည က ဖြစ်ရပ်… နှစ်ဖက်မိဘ သဘောတူညီမှုနဲ့ အိမ်ထောင်ပြု ကြတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ။ လာသမျှလူတွေကို ပြုံးပြရတယ်။သိသိမသိသိ နှုတ်ဆက်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြီး ပြီးသွားတယ်။ စိတ်မော၊ လူမောနဲ့ ။ငယ်သူငယ်ချင်း ယောကျာ်းတွေက ‘ခဲဖိုး’ တောင်းတယ်၊ ငယ်သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးတွေကတော့ ‘ရွှေကြိုး’ တားကြ တယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း မငြင်းဘူး။ ပေးစရာရှိတာ ပေးလိုက် တယ်။ ဒါမှ မင်္ဂလာဦးရဲ့ညဦးမှာ လူရှင်းတော့မှာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ ညရောက်လာတယ်။ဒီနေ့ညက အရမ်း တန်ဖိုး ရှိတယ်။ သူ ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုရှိနေမယ် တော့ ကျွန်တော် မသိဘူး။ ကျွန်တော် ရင်တွေ အရမ်း ခုန်နေတယ်။တစ်မျိုးကြီးပဲ။မင်္ဂလာဦးညဆိုတော့ ရင်ထဲမှာ ရေဆာသလိုလို၊ ဗိုက်ပြည့် သလိုလို။ ဘယ်လိုကြီးမှန်း မသိပါဘူး။အိပ်ရာ […]
ဒေါသကြီးလွန်းတဲ့ မန်နေဂျာ ကိုဒေါသ စမူဆာသည်လေးနဲ့ တွေ့သောအခါ…
“မန်နေဂျာ ကိုဒေါသ” စက်ရုံကို မန်နေဂျာအသစ် ရောက်လာတယ်.. စိတ်မြန်ကိုယ်မြန်ရှိပြီး စည်ကမ်းကြီးတဲ့မန်နေဂျာလို့ လူသိများတယ်… တစ်နေ့ တော့ အဲဒီမန်နေဂျာဟာ စက်ရုံထဲကဌာနတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေတယ်… ထုပ်ပိုးဌာန… ထုတ်လုပ်ရေးဌာန…ဈေးကွက်ဌာန… အဲ… ကံဆိုးချင်တော့ လုပ်သားနားနေခန်းထောင့်နားမှာ ငုတ်တုတ်ကြီးအိပ်ငိုက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မိပါလေရော.. ဘာပြောကောင်းမလဲ၊ မန်နေဂျာကိုဒေါသ ယမ်းပုံးမီးကျပေါ့… အိပ်ငိုက်နေတဲ့လူကို သူကိုယ်တိုင်သွားနှိုးတယ်… ” ဟေ့ကောင် ဟေ့ကောင်! ထစမ်း အခု” “ဗျာ..အင်း…အဲ” “အောင်မာ အလုပ်ချိန်ကြီး အိပ်နေတယ်.. ငါလုပ်လိုက်ရ နာတော့မယ်” “မဟုတ်…မဟုတ်ဘူးဆရာ’ ကျနော်ရှင်းပြ..ပြ” “ဘာမှရှင်းပြမနေနဲ့ ငါကိုယ်တိုင်မြင်တာ မင်းလစာဘယ်လောက်ရလဲ ပြောစမ်း” “သုံးထောင်ပါ” “ရော့…ဒီမှာသုံးလစာ၊ ဒီနေ့ကစပြီး ဒီစက်ရုံကို မင်းလာစရာမလိုတော့ဘူး၊ ကြားလားဟေ့ကောင်” သနားစရာပါဗျာ.ဟုတ်ကဲ့…ဟုတ်ကဲ့” ဆိုပြီး ဟိုလူလည်း ငွေကိုးထောင်လေးကိုင်လို့ ကုတ်ကုတ် […]
ဘော်ဒီတောင့်တောင့် ၃၅ နှစ်အရွယ် ဘေးအိမ်ကအမျိုးသမီး ယောက်ျားမရှိတုန်း အကူအညီလာတောင်းသောအခါ…
ဘော်ဒီတောင့်တောင့် ၃၅ နှစ်အရွယ် ဘေးအိမ်ကအမျိုးသမီး ယောက်ျားမရှိတုန်း အကူအညီလာတောင်းသောအခါ… ကျနော့်အိမ်နီးချင်း အမျိုးသမီးဟာ အသက် ၃၅ ၀န်းကျင်ရှိပေ မယ့် ဘော်ဒီအတော်လှတယ်ဗျာ။ သူ့ယောင်္ကျားက အိမ်မကပ်ဘူး။ အမြဲလိုလို သူမကို တစ်ယောက်ထဲပဲ တွေ့ရလေ့ရှိတယ်။ အပြင်ထွက်ရင် ကျနော်အိမ်ရှေ့က ဖြတ်သွားတိုင်း လှည့်ကြည့်ပြီး ပြုံးပြလေ့ရှိပါတယ်။ သူ ပြုံးပြတိုင်း ကျနော် ရင်ခုန်သွားတာ ၀န်ခံပါတယ်။ ဒီမနက်တော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အိမ်ရှေ့လာရပ်ပြီး ပြောပါတယ်။ “ဟိုင်း”😘 “ဟုတ်ဗျ။ ကျနော် ဘာများကူညီ ပေးရမလဲ”😁😁 “ရှင့်ဆီက အကူအညီ တစ်ခုလောက် လိုချင်လို့ပါ” “အိုးဟိုးဟိုး ..သိပ်ရတာပေါ့ ကူညီဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲဗျာ” “အို ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူးရှင်။ ကျမက ဖွင့်ပြောလိုက်ပြီး ရှင်က စိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ ပြောလိုက်ရင် ကျွန်မတော့ […]
မုံရွာမြို့မှာ သိန်း ၂၀၀၀ ခန့်ကို တစ်ကိုယ်တော် အနုကြမ်းဝင်စီးခဲ့တဲ့ အာဂအမျိုးသမီး
မုံရွာမြို့မှာ သိန်း ၂၀၀၀ ခန့်ကို တစ်ကိုယ်တော် အနုကြမ်းဝင်စီးခဲ့တဲ့ အာဂအမျိုးသမီး စစ်ကိုင်းတိုင်း ၊ မုံရွာမြို့ ၊ ရတနာပုံရပ်ကွက် ၊ အမှတ် ၃ လမ်း ၊ အိမ်အမှတ် ၆၀ ကို ဇွန် ၆ ရက် မနက်ပိုင်းက တစ်ကိုယ်တော် အနုကြမ်းဝင်စီးသွားတဲ့ အမျိုးသမီးကို ကျောက်ဆည်မြို့နယ်မှာ လုရာပါပိုက်ဆံတွေနဲ့အတူ ဖမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ မုံရွာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေ သိရပါတယ်။ ” ဒီလ ၇ ရက်နေ့ ညက သူ့ကိုဖမ်းမိတာပါ ၊ လုယက်သူ အမျိုးသမီးက အဲ့ဒီ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေအိမ်မှာ အိမ်ဖော်အဖြစ် အလုပ် လုပ်ခဲ့ဖူးသူ၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ် ဆင်နတ်တောင်ကျေးရွာက မနွယ်နီသန်း ခေါ် မမီးမီးဆိုသူဖြစ်တယ် “လို့ မုံရွာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံး တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။ […]
ကျောင်းသားတွေကို စာမေးပြီးရင်းကနေ စာသင်ခန်းထဲကနေ ထွက်ပြေးရတဲ့ ဆရာမရဲ့ အဖြစ်…
ကျောင်းသားတွေကို စာမေးပြီးတဲ့နောက် စာသင်ခန်းထဲကနေ ထွက်ပြေးရတဲ့ ဆရာမရဲ့ အဖြစ်… ဆရာမ။ ။ ဆရာမက စကားတစ်လုံး ဒါမှမဟုတ် ဝါကျတစ်ကြောင်း ရွတ်ပြမယ်… မင်းတို့က ဆန့်ကျင်ဘက် ပြန်ပြောရမယ်နော် တပည့်များ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာမ ဆရာမ။ ။ မြင့်သော – တပည့်များ။ ။ နိမ့်သော ဆရာမ။ ။ ဖြူသော – တပည့်များ။ ။ မဲသော ဆရာမ။ ။ ကျဉ်းသော – တပည့်များ။ ။ ကျယ်သော ဆရာမ။ ။ ဝသော – တပည့်များ။ ။ ပိန်သော ဆရာမ။ ။ လိမ်မာသော – တပည့်များ။ ။ လိမ်ပျော့သော […]